अमेरिकाबाट पूर्वपति रवि लामिछानेका नाममा‘ – नेपाली समाचारको स्रोत – bhandaforaviyan.com
अमेरिकाबाट पूर्वपति रवि लामिछानेका नाममा‘
| प्रकासित मिति : १४ भाद्र २०७६, शनिबार ०४:५७
डिभोर्सका क्रममा रविले मसित केही कागजी र केही मौखिक प्रतिवद्धताहरु गरेका थिए । त्यसअनुसार अमेरिकामा रहेको घरको मासिक किस्ता भुक्तानी गर्ने जिम्मेवारी उनले लिएका थिए । तर, उनले नियमित रकम नपठाएपछि तीन महिना अगाडि बैंकले घर लिलामीको नोटिस निकाल्यो । त्यसपछि उनले पठाएको केही पैसा र म आफैंले बाँकी रकम जोहो गरेर बैंकको किस्ता क्लियर गरेँ । आगामी दिनमा उनले प्रतिवद्धता पूरा गर्नेछन् भन्ने विश्वास लिएकी छु । अन्यथा, मैले पनि कानूनी उपचारको खोजी गर्नुपर्ने हुन सक्छ । रवि पक्राउ परेको खबरले अमेरिकामा हामी आमाछोरी चिन्तित बन्यौं । खासगरी ठूली छोरी निकै दुःखी थिइन् । मलाई पनि ननिको लाग्यो ।तर, यतिबेला नेपालमा रविलाई अर्को संकटले घेरेको छ । आत्महत्या दुरुत्साहन जस्तो गम्भीर मुद्दा लागेर पक्राउ परेर हालै पाँच लाख धरौटीमा रिहा भएका छन् । मुद्दाको फैसला भएको छैन । कागजीरुपमा सम्वन्ध अन्त्य भए पनि भावनात्मक सम्वन्ध नष्ट हुन समय लाग्दोरहेछ । सायद मैले आफ्नो मनबाट उनलाई पूर्णरुपमा निकाल्न सकेकी थिइनँ । त्यसैले उनलाई यो विपत्ति आइलाग्दा म बेचैन बनेँ ।
रवि हिरासतबाट निस्के पनि दोषमुक्त भएका छैनन् । म चाहन्छु-अदालतले चाँडोभन्दा चाँडो यस विषयलाई किनारा लगाओस् र वास्तविक तथ्यलाई बाहिर ल्याओस्
तर, उनीमाथि उनकै पूर्वसहकर्मीले पैसा खाएको आरोप लगाइरहँदा त्यसले मलाई अचम्म बनाएको छ । रविबाट यस्तो काम भयो होला भन्ने विश्वास लाग्दैन । एउटा श्रीमतीका रुपमा मलाई रविलाई दिएका चोटहरु असंख्य होलान् । त्यो सम्झने बेला अहिले होइन ।
रवि हिरासतबाट निस्के पनि दोषमुक्त भएका छैनन् । म चाहन्छु-अदालतले चाँडोभन्दा चाँडो यस विषयलाई किनारा लगाओस् र वास्तविक तथ्यलाई बाहिर ल्याओस् । शालिकरामकी पत्नी सम्झनाले न्याय पाउन् । यदि निर्दोष भए रविले पनि न्याय पाउन् ।
हिजो बुवाको मुख हेर्ने दिन । अघिल्ला वर्षमा छोरीहरु यस दिन कति उत्साहित हुन्थे । मेरा छोरीहरुका पितालाई ‘फादर्स डे’ को शुभकामना छ । आफ्नो संसारमा भुलेर छोरीहरुलाई बिर्सियौ भने पनि छोरीहरुले तिमीलाई कहिल्यै भुल्न सक्ने छैनन् । किनकी एकपटकको बाबु सधैंको बाबु हो । ‘पूर्वश्रीमान’ भनेजस्तो ‘पूर्वबाबु’ वा ‘पूर्वछोरी’ कहिल्यै हुँदैन । अनलाईनखबरबाट
गौं हत्या प्रकरण : दैलेखमा मगाइएकै थिएन गाई
रुकुम घटना : मृतक सबैको टाउकोमा चोट १४ भाद्र २०७६, शनिबार ०४:५७
कोरोनाले भयावह रुप लिएको भारतमा फेरि सलहको आतंक १४ भाद्र २०७६, शनिबार ०४:५७
नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशत रहने, लगानी ३.४ प्रतिशतले घट्ने । १४ भाद्र २०७६, शनिबार ०४:५७
भारतीय अतिक्रमणको बिरोध गर्दै पोर्चुगलमा बस्ने नेपालीहरुले बुझाए विरोधपत्र । १४ भाद्र २०७६, शनिबार ०४:५७
अन्तरजातीय प्रेमको दुःखद घटना ! १४ भाद्र २०७६, शनिबार ०४:५७
रेमिट्यान्स घट्यो, बेरोजगारीसँगै गरिबी बढ्ने प्रक्षेपण १४ भाद्र २०७६, शनिबार ०४:५७
१३ वर्षीया बालिकालाई बलात्कारीको श्रीमती बनाएर समाजले पठायो, अर्को दिन लास रुखमा भेटियो १४ भाद्र २०७६, शनिबार ०४:५७
कोरोना संकटको कारण अमेरिकामा डाक्टरहरुको तलब कटौती, नर्सहरु बेरोजगार बनिरहेका १४ भाद्र २०७६, शनिबार ०४:५७
एमसिसी सम्झौता सदनको कार्यसूची बनाउँदै सरकार ! १४ भाद्र २०७६, शनिबार ०४:५७
कोरोनाको हाउगुजी देखाएर डब्लूएचओको लकडाउन व्यापार १४ भाद्र २०७६, शनिबार ०४:५७
प्रधानमन्त्री ओलिको सम्बोधन : कोराना फैलिनुमा भारतको योगदान ! (पूर्णपाठ सहित) १४ भाद्र २०७६, शनिबार ०४:५७
थप ७२ जनामा कोरोना संक्रमण, कूल संक्रमितको संख्या ६७५ पुग्यो। १४ भाद्र २०७६, शनिबार ०४:५७